20 mfm minamato yekunamatira visa NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 20 mfm munamato mapoinzi vhiza
20 mfm munamato mapoinzi vhiza
Pisarema 118: 10-14:
10 Ndudzi dzose dzakandikomba, asi muzita raIshe ndichavaparadza. 11 Vakandikomba kumativi ose; Zvirokwazvo, vakandikomba, Asi muzita raIshe ndichavaparadza. 12 Vakandikomberedza senge nyuchi; vakadzima senge moto wemhinzwa, nekuti muzita raIshe ndichavaparadza. 13 Makanditambudza nesimba kuti ndiwe, asi Ishe akandibatsira. 14 Ishe isimba rangu nenziyo yangu, vava ruponeso rwangu.
Isu tinoshumira Mwari wamarudzi ese, hapana nyika inogona kuramba murume kana mukadzi akatumwa naMwari. Nhasi ndanyora makumi maviri mfm munamato mapoinzi visa. Iyi minamato yemunamato yakafuridzirwa nemurairidzi wangu Dr Olukoya weGomo remoto uye hushumiro hushumiro. Munamato uyu munamato unoteerera, uyo uri usati watanga kunyengetera tinofanira kuongorora zvimwe zvinhu kutanga.
Zvinhu zviviri zvekuongorora usati wanyengeterera vhiza.
1). Mwari vakatuma here? Kuda kwaMwari here kuti muende kunyika iyoyo? Mwari vanongodzosera ivo vakatumwa. Kana asina kukutuma, uri kuenda wega, uye ungatadza kubudirira. Naizvozvo iwe unofanirwa kunamatira kuti Mwari vatange kutanga, uye uve nechokwadi chekuti ndiko kuda kwaMwari kuti iwe uende kunyika iyoyo.
2). Nei uchifamba? Sei uchida kusiya nyika yako? Iwe unofanirwa kuve uine chikonzero chechokwadi uye chinangwa chekubva, pane zvakawanda zvisizvo zvikonzero nei vanhu voda kubva ipapo nyika vashoma pane avo:
Chikonzero Chakaipa 1: Vanotenda kuti vachapfuma kunze. Ichi chikonzero chakashata kwazvo nekuti hupfumi huri mupfungwa. Late Arch Bishop Benson Idahosa vakanzi, "dzvinyu muNigeria harizove nguruve muAmerica". Kana iwe usingakwanise kupfuma munyika yako, mikana iwe haugone kupfuma chero kupi. Nyika yako pamwe nyika yechitatu yepasi, asi kune vapfumi vazhinji mairi futi. Pfuma inotanga kubva mundangariro. Kana iwe uchifunga kupfuma, iwe uchaita zvakapfuma, uye kana iwe ukaita zvakapfuma, iwe uchave wakapfuma.
Chikonzero Chakaipa 2: Zvinodhaka Zvakaoma: Ichi chikonzero chinotyisa chekuenda kune imwe nyika, Mwari zvirokwazvo haazokutsigire kana ichi chiri chikonzero chako.
Kune zvakare zvikonzero zvakanaka zvekuenda kune dzimwe nyika, ndeyekuenderera mberi nedzidzo yako, kushanya, kuwedzera bhizinesi, kuzororo uye kuzororo nezvimwe.
Kunyangwe paine chinangwa chako chakanaka chekuenda kunze kwenyika, unogona kuramba kunyimwa vhiza, ndipo panopinda minamato. Idzi mfm minamato yenzvimbo dze visa dzinokutungamira apo iwe uchinamata chero chipingamupinyi cha satanic chichibva munzira yako. Sezvo iwe paunonamata uyu munamato uchinongedzera nhasi, Mwari wekudenga vachakupa kukudzwa kwemweya pamberi pechisimba uye vhiza yako yekubvunzisisa ichabudirira. Namata iyi minamato nhasi nekutenda uye kutarisira kuti Mwari vaite basa rakakura muhupenyu hwako muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekuti ndimi yega munogona kundinunura.
2. Baba, ngavatadzise chero chipinganidzo munzira yangu kuti chibve, muzita raJesu.
3. Baba, rega satanic network yakarongedzwa kupesana nekubudirira kwangu iparadzwe, muzita raJesu Kristu
4. Baba, regai mweya wenyasha nowokunakisa uuye pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
5. Baba, ziso rega rega rinotarisa mafambiro akaita rwendo rwangu vagamuchire miseve yemoto, muzita raJesu.
6. Ini ndinobvisa zita rangu nekero kubva mukutonga kwevakaipa vanyengeri, muzita raJesu.
7. Ngavatore ngirozi dzaMwari mupenyu dzikungurutsire dombo ririkutadzisa kubudirira kwe visa yangu, muzita raJesu.
8. Mwari ngavasimuke vatorese vavengi vese vekuburitswa kwangu ngavaparadzirwe, muzita raJesu.
9. Zvese mweya yakaipa inodzimba kuzondinetsa, sungwa, muzita raJesu.
10. O Ishe, ndiitei kuti ndiwane kufarirwa nevhiza yekubvunzurudza vhiza muzita raJesu ..
11. O Ishe, ita kuti kutsiva kwamwari kuitike kana izvi zviri izvo zvinondifambisa pamberi.
12. Ini ndinoramba mweya we muswe uye ndinoti mweya we musoro mumavisa angu tenderwa nezita raJesu
13. Ndinoraira mhinduro dzese dzakashata dzakadyarwa nadhiyabhorosi mundangariro dzemunhu chero upi noupi kuti ndisapfuurire mberi kuti zviputswe zvidimbu, muzita raJesu.
14. O Ishe, chinjana, bvisa kana shandura vese vamiririri vevanhu vakapfugama pakunditadzisa kuwana vhiza yangu muzita raJesu.
15. Ini ndinogashira kuzodzwa kuti nditapure pamusoro pevangu vezera rangu, muzita raJesu.
16. Ishe, ndibatsirei kuona uye kubata chero kushaya simba mandiri uko kunogona kutadzisa kufambira mberi kwangu.
17. Ini ndinosungira munhu wese ane simba akapihwa basa kuti atadzise kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
18. Ini ndinogashira mvumo yekudzora muvengi wese wekubudirira kwangu, muzita raJesu.
19. Ini ndinokusunga uye kukupa iwe mweya yewakaoma rombo rine chekuita nekubvumirwa kwangu kwe visa vhita raJesu.
20. Ini ndinoramba izwi rekuti “kwete” uye imwe mhinduro isina kunaka panguva yekubvunzurudzwa vhiza yangu muzita raJesu
Previous nyayaNhaurwa dzegumi dzeMavhesi nezveKuyedzwa kjv
inotevera20 minamato Yeminyengetero ine simba yekumutsa vakafa
Samuel Francis Gumiguru 17, 2019 Pa 12: 41 am
Angie Gumiguru 22, 2019 Pa 10: 15 am
Mwari vakugezei nekuropafadzwa kwake
Siya A Reply to Samuel Francis kukanzura mhinduro